Daawo: Weerar iyo Qaraxyo Culus oo Xalay lagu qaaday Magaalada Mandheere iyo Alshabaab oo sheegtay – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Weerar iyo Qaraxyo Culus oo Xalay lagu qaaday Magaalada Mandheere iyo Alshabaab oo sheegtay
by Tifaftiraha K24 6th October 2016 067
Ugu yaraan Lix Qof ayaa ku geeriyootay,markii ay Xalay saqdii dhexe weerar ku qaadeen kooxo lala xiriirinayo Al-Shabaab, qaar ka mida Dadka Dhagax qoda oo ku sugnaa Xaafadda Bulla ee Magaalada Mandheera.
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera ee Dalka Kenya, Ali Roba, ayaa warbaahinta u sheegay in Dadka la weeraray oo ka koobnaa 33 Qof ay 27 ka mid ihi soo badbaadiyeen, kuwaasoo dhammaantood ahaa Dad aan kasoo jeedin Mandheera.
Frederick Shisia, oo ah Sarkaal ka tirsan golaha degaanka Mandheera, ayaa sheegay inay kooxdu isku dayday iney jaraan isgaarsiinta Magaalada,iyagoo sameeyay qaraxyo ay ku qalqal gelinayaan laamaha ammaanka iyo Bulshada.
Saraakiisha Boliiska ee Gobolka Mandheera ayaa sheegtay inay ku raac joogaan Dableydii weerarka soo qaadday, haatanna ay wadaan baaritaanno arrintaasi ku aaddan.
Xasaasi: Warar dheeraad ah oo laga helaayo Nabad-doon Caan ah oo Lagu Dilay Dagmada Baardheere ee Gobolka Gedo+Magaciisa
TOP NEWS: Dhageyso Maxaadan Ogeyn oo Shariif Xasan uu ka Yiri Xubnaha Aqalka Sare ee Koonfur Galbeed Laga sugaayay in ay soo Gudbiyaan???
MAQAAL: Muxuu ku saabsan yahay wadatashiga kismaayo ee somali loo sheegay ?
admin 6th January 2016
Dhagayso:- Xildhibaan Magan &amp;quot; Mooshinka Barlamaanka Jubba waa Sax wana wadaynaa &amp;quot;
admin 25th May 2015 27th August 2015
Dhagayso:- Madaxweyne Madoobe Nuunow Maxamed " Muqdisho waxaan u Nimid inaan wada Hadalno Dowladda "
admin 6th May 2014 28th August 2015